Madaxda Yurub iyo Turkiga oo gaaray heshiis aad uga nixiyay qaxootiga (qaasatan Soomaalida) | Somaliska
Af-Soomaali / Germany / Socdaalka
Madaxda Yurub iyo Turkiga oo gaaray heshiis aad uga nixiyay qaxootiga (qaasatan Soomaalida)
Madaxda guud ahaan wadamada Midowga Yurub (EU) iyo raysal wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa xalay shaqdii dhexe heshiis ku gaaray magaalada Brussels. Heshiiskaan ayaa ah mid si weyn saameyn uga yeelanaya qaxootiga soo galaya Yurub iyo sida loo qaabilayo. Qaasatan heshiiskaan ayaa ah mid albaabada ka xirayo guud ahaan qaxootiga marka laga reebo kuwa soo jeeda Syria.
Heshiiska ayaa nuxurkiisu yahay in dhamaan qaxootiga doomaha ku soo galaya wadanka Giriiga dib loogu celin doono Turkiga si qasab ah. Ka dib ayaa qaxootiga ka soo jeeda Syria waxaa la siin doonaa viso ay kaga soo bixi karaan wadanka Turkiga oo ay Yurub ku soo gali karaan. Kuwa ka soo jeeda wadamada kale sida Somalia, Afghanistan iwm ayay u taala Turkey sida ay ka yeelayso balse looma ogolaan doono in ay doon ku soo galaan Giriiga. Turkey ayaa la sheegay in ay qorsheynayso in ay dadkaas dib ugu celiso wadamadii ay ka yimaadeen.
Heshiiskaan ayaa Turkey waxaa la siin doonaa lacag gaaraya 6 bilyan oo Euro isla markaana waxaa dadka u dhashay Turkey viiso la’aan ku soo gali doonaan guud ahaan Yurub wixii ka bilaabata bisha Juun ee sanadkaan. Sidoo kale Turkey ayaa loo fududeyn doonaa sidii ay uga midnoqon lahayd EU-da.
Heshiiskaan ayaa ah mid aad u saameynaya qaxootiga ka soo jeeda wadamada Afrika. Xitaa qaxootiga hadda ku sugan Giriiga ayaa dib loogu celin doonaa Turkiga sida heshiisku dhigayo. Heshiiskaan ayaa si rasmi ah loo dhamaystiri doonaan 17-maarso oo ay kulmi doonaan madaxda Yurub.
Goorma ayaa la xalinayaa arinta soomaalida?
Xisbiga garabka midig oo ku guuleystay doorashada Norway
Billström muxuu ka yiri go’aankii maxkamada?
Asc allah ayey awaamiirtiisu fulayaan qof walbana hadii ay xag allah uga qoran tahey inuu ku ceesho yurub cidna ma hor istaagi karto allah waxan kabarya inuu umadaha muslimka meel walbo ay aduunka ka joogan naxariistiisa u waasiciyo gaar ahaan wallalaheyga somaliyeed ee ku dhibateysan gudaha dalka iyo kuwa dibadaba Aamiin
Fikrad lala dhacay 13 0
Osmaan Baaslaawe says:
March 8, 2016 at 15:43
Salaaan sare inta ku xiran page somaliska ani waxaan oran lahaay Qof walbo Ooo mu adim yoosan ka soo tagin wadan kiisa hoyo wadan kiisa Qof walbo Ooo ku haaayo amni daro aku jihaado
Shiine glbl says:
March 8, 2016 at 15:59
Wa iska sheeko
March 9, 2016 at 02:52
Heshiiska liibiya iyo taliyaaniga malagu soo qaadi ama dhanka liiya waa caadi jimcaale
mubaarik yus says:
March 9, 2016 at 22:55
wxn Alah uga baryaya umada islaamka inu Alah dhibta ka qado gaaladana ilahay inoga hiiliyo dadka somaliyeed ilahay qalbiyadooda isku dumo Alahuma Amiin